Qarax Caawa ka dhacay Magalada Buhoodle.. – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Qarax Caawa ka dhacay Magalada Buhoodle..
Allhadaaftimo August 1, 2018 Uncategorized
Naftii halige isasoo miidaamyey ayaa isku qarxiyey baabuur ay saaraayeen masuuliyiin isugu jira siyaasiyiin, saraakiil ciidan iyo odayaal deegaanka ah.
Waxaa loo malaynayaa in bartilmaameedku ahaa masuuliyiinta baabuurka saaraa oo kala ah.
Cabdifataax Maxamed Cali (Rotman) oo soo noqday lataliyaha Ra’isal Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo arimaha siyaasada uu kala talin jirey, Axmed Maxamuud Doolaal oo ahaa wasiirkii hore ee armaha gudaha Khaatumo iyo Col Cabdiraxmaan Cabdilaahi Axmed Nuur (Afweyne) oo kamid ah saraakiisha ciidamada Puntland ee gobolka Cayn.
Baabuurka ayuu is hortaagey naftii haligaha qaraxa fuliyey kadibna baabuurka ayaa istaagey sidaas ayuuna isku qarxiyey.
Khaasare dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxa waxaana la xaqiijiyey geerida AUN Cabdifataax Maxamed Cali (Ina Rotman) iyo Axmed Maxamuud Doolaal oo soo noqday wasiirkii arimaha gudaha Khaatumo.
Waxaa la helay Maydka qofka loo malaynayo inuu is qarxiyey oo wajigiisu badqabo halka jidhkiisa kale googo’ay walina ma jirto cid aqoonsatay qofka uu yahay wajigan la helay ee qofka wax qarxiyey.
Waxaa dhaawac culus soo gaarey Yuusuf Cismaan Baxnaan (Dhagcas) oo kamid ah odayaasha deegaanka sida weyn looga yaqaano, iyo Col Cabdiraxmaan Afweyne oo isagu dhaawac sahlan qaba. iyo darawalkii baabuurka masuuliyiinta waday.
Ninkan Dhalinyarada ah ee loo adeegsaday Qaraxan Ayaa ah kan sawirkiisu ka muuqdo Hoo
Previous Gen Nuux Taani,, Gobolka kelliya ee illa hadda xoolo lagga hayn waa Gobolka Sanaag oo uu Wasiirka Gashaandhigu Kasoo jeeddo.,,,
Next Wasiirkii Hore ee wasarada Gashandhiga SL Ahmed H Ali oo soo gaadhay Ceerigaabo